Ahoana ny fomba hidirana emoji avy hatrany amin'ny alàlan'ny hitsin-dàlana keyboard | Avy amin'ny mac aho
Izany dia hitsin-dàlana fitendry izay efa ampiasain'ny mpampiasa macOS hatry ny ela, saingy mbola manana fanontaniana vitsivitsy momba ny fomba hampiasana haingana ny keyboard emoji isika raha manoratra amin'ny Mac.
Androany dia ho hitantsika fa tsotra ny fanatanterahana izany hetsika izany noho ny hitsin-dàlana fitendry tsotra izay efa hatry ny ela .Mieritreritra aho fa tadidiko fa hatramin'ny Yosemite na talohan'izay- ary sokafy ny varavarankely emoji hampiasa azy ireo amin'ny lahatsoratra rehetra manoratra amin'ny Mac izahay, raha mbola ekena ny endrika Unicode.
Tsotra be ny fampiharana azy io fa ambonin'izany rehetra izany dia tena ilaina tokoa amin'ireo toe-javatra ireo izay tsara ho antsika ny fampiasana emoji ao amin'ny tambajotran-tserasera, antontan-taratasy na ny mitovy aminy. Noho izany dia mila manery isika: ctrl + cmd + bara habakabaka ary vonona. Ho hitantsika ny varavarankely miaraka amin'ny emoji hiseho ary tsy mila mampiasa afa-tsy ilay tianao ampiana azy izahay.
Ny varavarankely mihitsy dia manampy safidy mahaliana toy ny motera fikarohana emoji, na ny fanasokajiana ireo amin'ny alàlan'ny kilasy, zavatra izay manamora kokoa antsika ny mampiditra marika na tarehy ao anaty atiny. Raha etsy ankilany isika dia tsy maniry ny hisehoan'ny emoji rehetra ary maniry tsotra fotsiny ny sasany izay ampiasaintsika matetika hiseho, dia afaka manampy fitambarana fanalahidy isika nefa tsy mila manery ny "ctrl + cmd + space bar" , Azo atao izany avy amin'ny System Préférences> Kitendry, eo amin'ny tabilao Text ary afaka manamboatra ny emoji tadiavinay na hampiasa bebe kokoa izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » Tutorials » Ahoana ny fomba hidirana emoji avy hatrany amin'ny fampiasana hitsin-dàlana fitendry
Mpankafy aho satria misy ity hitsin-dàlana fitendry ity. Ny tiana holazaina dia izao ny activité an'ny spotlight dia mandeha. Ahoana no hahitako azy?
Raha tsy nokasihinao ny sehatr'asa dia hafahafa izay lazainao. Na izany na tsy izany, zahao ao amin'ny zoro Edit eo an-tampony izay ny hitsin-dàlana fitendry izay manamarika anao amin'ny Emojis sy ny marika
Raketo memo feo ary ankafizo ny manoratra amin'ny Auditory